Sikidy soa tsy andihizana – Malag@sy Miray
Sikidy soa tsy andihizana, sikidy ratsy tsy taniana
dikanteny : Un oracle favorable ne fait pas danser, comme un oracle défavorable ne fait pas pleurer
A favorable oracle doesn’t make to dance, like an unfavorable oracle made not cry (Logiciel no nadika ity teny anglisy ity ka asa raha mba mety. hihihi)
Raha ny tena dikany mivantana araka io voasoratra io dia toa manao hoe: Aleo hitranga izay hitranga fa tsy raharahako, na ho soa, na ho ratsy.
Nefa raha niezaka nanakatra ny hevitr’izy ity aho dia izao no hitako. Tsy mifanalavitra loatra amin’ilay fomba fiteny iray izay izy ity, manao hoe ‘aza mihomehy ny fahavoazan’ny sasany’
ary koa ilay hoe adin’ombalahin’ny mpianakavy, ny maharesy tsy hobiana, ny resy tsy akoraina.
Ahoana no fihevitrareo?
Par Avylavitra 10 Commentaires
> sikidy ratsy tsy taniana [itaniana na itomaniana]
Ny mety ho hevitra fonosiny hafa koa dia ny hoe « tsy misy zavatra voasoratra mialoha » [il n’y pas de fatalité | there is no fate] fa mbola mety miova io ka aza mitomany aloha ihany na mibitaka dieny mialoha 😉
9 novembre 2007 à 12:51
Tomavana> tena TANIANA mihitsy k’ah. Fototeny niavian’ny tomany sy fitomaniana ihany no niaviany. Nijery boky koa aho nanamarina azy io (in Ohabolana Malagasy) ka tena toy io no ao.
AvyLavitra> hitanao amin’izao tsy fahaizan’ny malagasy maro ny teny malagasy izao dia tsara kokoa raha manakaiky ny teny mahazatra ny fanaovana azy. Mba tsy ho very loatra olona mihaino sy mamaky.
Ankoatra izay dia tonga amin’ilay fiteny hafa koa io hoe sikidy mila voa tsy hary ka mampandihy ny marary. Izany hoe manana fahalalahana ny olona hino ny lazain’ny sikidy na tsia, na dia tamin’izany fotoana izany aza araka ny fahalalako azy.
Eo amin’ilay teny anglisy indray moa dia mety ho tsara kokoa raha « as » no eo amin’ny toeran’ny « like » nefa tsy dia mahay loatra io teny anglisy io aho 😉 .
Tomavana> nefa raha jereko io filaza io dia « fataliste » mihitsy ny gasy.
Izany hoe tsara kokoa raha manaiky ilay sosokevitry Tomavana hametraka ny teny hoe itomaniana na dia tsy izay aza izy amin’ny tena izy.
11 novembre 2007 à 7:49
Araka ny voalazan’i AvyLavitra dia fototeny niavian’ny tomany ny tany. Hoy ny any amin’ny faritra atsinanan’ny Nosy hoe « zaza be tany » fa tsy « zaza be koretaka ».
Miombok’evitra amin’i AvyLavitra aho momba ilay ohabolana fa tsy manaiky kosa ilay hoe « fataliste » ny Gasy. Misy koa mantsy ilay fiteny hoe « Rano raraka tsy azo raofina » toa manao hoe, avelao, adinoy fa tsy hiverina intsony, ny ho avy no jereo. Optimisme?
Andeha atao hoe tsy fataliste ny gasy fa mahita kosa aho fa tsy miraharaha izay mihatra aminy loatra ny gasy rehefa iraisana ny fahavoazana. Asa raha manaiky izay indray i Su na tsia!
12 novembre 2007 à 14:12
Toa marina io lazain’i Jentilisa io an. Rehefa entin’ny maro dia hoy izy hoy ‘Fahoriana iaraha-mizaka, ka maivana, Soroka miara-milanja’. Tsy any amin’ny fahoriana ihany fa na amin’ny andavanandrom-piainana aza raha vao misy mitranga, dia toa tsy lehilahy raha be taraina fa ny rehetra aza mahazaka ihany. (Tsy hoe avahana akory ny vehivavy an! Fomba fiteny iny).
13 novembre 2007 à 1:54
Izay tokoa angamba no mahasamihafa ny Gasy amin’ny mponina any amin’ny kontinanta Afrikanina ka mahatonga an’i Gasikara ho toa milamindamina. Tsy miraharaha ve ny olona sa mahari-pery, sa mihevitra lalina aloha vao mandray andraikitra? Misy koa aza ny sasany toa mivaona amim-boalohany nefa avy eo dia mitony tanteraka hany ka tsy mitondra vokatra loatra. Sa ahoana hoy ianareo?
14 novembre 2007 à 8:07
Tsy haiko aloha na mahari-pery no ilazana azy, fa ny zavatra tsinjoko hatrizay dia ity; ireny tsy dia miteny ireny dia sarotra be ny mahalala ny tena ao am-pony, ary rehefa injay mamoaka ny ao am-pony amin’izay izy, dia mipoaka be toy ny baomba. Koa tsy tsara ihany ve izany ny mandinika (tsy ela be kosa an!) dia tonga dia miteny avy eo fa tsy miandry sy mizaka lava ny zakain’ny rehetra eny, rehefa hita fa tsy zakan’ny tena manokana. (Mbola olana koa anefa io fa lasa fahavalon’ny maro ianao raha vao mitsangana alohan’ny rehetra eo, ka tsy mahatafavoaka baolina, eny fa na dia marina aza ny anao).
salama daholo tompoko ô!
izao izaho vao nahita ity fifandraisana ity ka dia niditra hita eo ambony eo anefa fa toa efa nijanona ela be izy ity notsy nisy nampiasa ka dia nanontany ny tenanay hoe nankaiza ny olon-tety no soratra sisa no hita! tsara ihany ny fameloman- maso ny hevitra tahaka itony